Sandesh Prabhahएनआरएन मलेसियाको अन्तिमबैठक सम्पन्न, केके निर्णयहरु भए? Sandesh Prabhah
एनआरएन मलेसियाको अन्तिमबैठक सम्पन्न, केके निर्णयहरु भए?
बिहीबार ३१ असार, २०७८
क्वालालम्पुर- गैर आवासीय नेपालि संघ मलेशियाको आगामी अधिबेशनको लागि समितिकोअन्तिम बिभिन्न निर्णयहरु गर्दै बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ।संघको २०१९-२१ को समिति लाई विघटन गर्दै निर्वाचन समिती लाई आगामी अधिबेशनको सम्पुर्ण जिम्मेवार हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।
आफुले दर्ता गरेको उम्मेदवारी कारणबस फिर्ता लिन चाहे १७ जुलाई ५ बजे भित्र फिर्तागर्न सकिने बिज्ञप्तीमा जनाएको छ। जारी बिज्ञप्तीमा उम्मेद्बारी फिर्ता लिएको खण्डमा उमेदवारले दर्ता बखत तिरेको शुल्क फिर्ता नहुने समितिको बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख छ।
कार्यसमिति सदस्यताका लागी उम्मेरद्वारी दर्ता शुल्क अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक बढी निर्धारण गरीए संगै सामाजिक संजालाहरुमा बिरोध भएका छन्।उक्त जनचासो र सरोकारको बिषयमा संघका निवर्तमान कोषाध्यक्ष्य कृष्ण प्रसाद नेपाल लाई टेलिफोन मार्फत जिज्ञासा राख्दा बिगतमा राजनीतिक पार्टीहरुले बहुमतका लागि सदस्यहरु दर्ता गर्ने” र बहुमत देखाउदै बार्गेनिंग गर्ने सदस्यता बापतको शुल्क नबुझाउने बैठक बोलाउदा उपस्थित नहुने जस्ता गतिबिधिहरुले गर्दा यो पटक त्यस्ता गतिविधिहरु बाट बच्न यस्तो निर्णय गरिएको बताए।
भने संघको २०१९-२१ को कार्यसमितिमा निवर्तमान अधक्ष्य हरि भट्टराईले सस्थाको आर्थिक अवस्थामा निक्कै सुधार गरेको र,जनचासो र श्रमिक हितमा ठुलो योगदान गरेको उनले दाबि गरे। आगामी कार्यसमिती कस्तो हुने हो चिन्ता व्यक्त गरे।अघिल्लो समितिमा श्रमिक हितमा धेरै काम गरयौ सस्थाले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पुरै निर्बाह गरेका छौ। र बाकि रहेका काम पुरा गर्न छ। “उनले थपे”।
संयोजक – पुरुस्वत्तम कट्टेल 0162532851
सदस्य हरु – बिष्णु प्रसाद पौडेल 01116836184
– बाबुराम शर्मा 0189774750
– बासु पोख्रेल 0173080378
– नेपाली राज दूतावास प्रतिनिधि